के हो पाईल्स भनेको ?
बवासीर या पाइल्सलाई मेडिकल भाषा मा हेमरॉइड्सको नामले जानिन्छ । यसमा गुदामार्ग (ऐनस) को भित्रि र बाहरी क्षेत्रका साथै मलाशय (रेक्टम) को तल्लो भागको शिरा (वेन)हरु सुन्निएर आउँछ । जसको फलस्वरुप ऐनसको भित्र र बाहिर या कुनै एक ठाउँमा मस्साको जस्तो दाना बन्न जान्छ ।
गर्मीयाममा नरिवलको पानीको माग निकै हुन्छ । यो स्वास्थ्यका लागि धेरै लाभदायक मानिन्छ । बिहानै नरिवल पानी खाँदा दिनभर ऊर्जावान् भइरहन सकिन्छ । यस्तो अभ्यासले शरीरमा पानीको कमी (डिहाइड्रेसन) हुन पाउँदैन ।
रोगमा सपनाको प्रभाव र होमियोप्याथी उपचार
जब तपाई आफ्नो उपचारको लागि कुनै होमियोप्याथिक चिकित्सक कहाँ पुग्नु हुन्छ, डाक्टरले तपाईले भनेका शारीरिक एवं मानसिक समस्यालाई टिपोट गर्दछ । यस बाहेक तपाईको भोक- प्यास, जाडो, गर्मी, ईच्छा-अनिच्छा, रीसराग, द्वेष, स्वभाव, पेशा, सामाजिक अवस्था, निद्रा एवं राती सुत्दा देखिने सपनाको बारेमा पनि सोध्नेछ । रोगीलाई बडो आश्चर्य लाग्दछ । उसले भन्न सक्छ, डाक्टर सा'ब मेरो रोगसँग मैले देख्ने सपनको के सम्बन्ध छ?
मुटु रोग उपचारकालागि सस्तो गन्तव्य बन्दै वीपी प्रतिष्ठान
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मुटु रोगीको उपचारकालागि पछिल्लो एक वर्षयता सस्तो गन्तव्य बनेको छ ।
लुपस यस्तो रोग हो, जुन महिलालाई पुरुषका तुलनामा नौ गुना बढी हुने गर्छ । कतिसम्म भने, सेलेना गोमेजलगायत कैयौँ कलाकार कुनै न कुनै बेला यो रोगबाट पीडित भएका छन् । हाम्रोमा चाहिँ विडम्बना, यो रोगका बिरामी कति छन् भन्नेबारे कुनै वैज्ञानिक तथ्यांक छैन ।सिस्टेमिक लुपस इरिथेमाटोसस अर्थात् लुपस एउटा अटो इम्युन रोग हो । यसले शरीरका विभिन्न अंग (जस्तै : छाला, जोर्नी, मृगौला, मस्तिष्कलगायत) लाई प्रभावित गर्छ ।
ओखर एक मात्र यस्तो फल हो, जसमा मानिसका लागि अत्यावश्यक ओमेगा ३, ओमेगा ६ र अल्फा लिनोलेनिक एसिड प्रशस्त मात्रामा हुन्छ । ओखरमा भिटामिन बी, भिटामिन ई, म्याग्नेसियम, जिंक, कपर, आइरन, क्याल्सियम अनि पर्याप्त एन्टि–अक्सिडेन्ट र प्राकृतिक मिनरल हुन्छ । एक मुठी ओखरमा ४ ग्राम प्रोटिन, २ ग्राम फाइबर र म्याग्नेसियम (१० प्रतिशत डीबी) हुन्छ ।
२०७५ साल लागेयता वैशाख तेस्रो सातासम्म कुकुरले टोकेर रेबिज भएकाले तीन जनाको दु:खद मृत्यु भइसकेको छ । राजधानीको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आँकडा हो यो । यसअघि गत वर्ष कुकुरले टोकेर टेकु अस्पतालमा भर्ना भएका १७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने करिब १२ जना रेबिज प्रभावितले उपचार सल्लाह लिए पनि अस्पतालमा नाम दर्ता गराएका थिएनन् ।
केहि दिन अगाडिको कुरो हो, मेरा एक जना मित्रको फोन आयो । उनले भने, डा. साब मेरो सानो नौ महिनाको छोरा, पातलो हरियो दिशा चार, पाँच पटक गर्नुका साथै ज्वरो पनि छ । स्वभाव एकदम चिडचिडापन छ । रोई रहन्छ, केहि गर्दा पनि चुप लाग्दैन । काखमा लिएर घुमाउदा मात्र चुप लाग्छ । बच्चाको डाक्टरलाई देखाएर औषधि ख्वाएको केहि भएन । के होमियोप्याथिमा यसको उपचार छ?
राजनैतिक प्रतिवद्धता भए रेविजले हुने मृत्यु शुन्यमा झार्न सकिने
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डव्लुएचओ) ले विश्वमा हरेक ९ मिनेटमा एक व्यक्तिको दर्दनाक मृत्युको कारण रहेको रेविजलाई समाप्त गर्ने प्रयासमा तिव्रता ल्याउन सदस्य राष्ट्रहरुलाई आह्वान गरेको छ ।
क्यान्सर र मुटुका बिरामी बढी
नेपालमा पाइएका आठ कडा रोगमध्ये क्यान्सर र मुटुरोगका बिरामी बढी देखिएका छन् । यस्ता कडा रोग लागेपछि बिरामीले सरकारबाट उपचार खर्चस्वरूप एक लाख रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् ।